Logo SDA | ADVANTISTA Federasiona Madagasikara Afovoany
Ny hevitry ny Logo
Ny Logo dia maneho ny soatoavin’ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito. Ny fototra iorenany dia ny Baiboly, ny Tenin’Andriamanitra, aseho misokatra satria ny vakiny dia tokony hovakiana sy ampiharina. Ny afovoany ho an’ity hafatra ara-baiboly ity dia ny lakroa, izay koa dia singa afovoan’ny logo. Ambony ny hazo fijaliana sy ny Baiboly misokatra dia lelafo mandoro ny Fanahy Masina, mpitondra hafatra ny fahamarinana.
Ireo tsipika tazana miakatra eny an-tampon’ny logo dia manoro ny fanantenana ny fitsangananan’ny tena amin’ny maty sy ny fiakarana ho any an-danitra amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany, ny tanjona faratampon’ny finoantsika.
Io no endrika nofaritan’ny andalana telo izay manasokajy sehatra midadasika. Ny andalana dia maneho ireo anjely telo ao amin’ny Apokalypsy 14 izay manenika ny tany sy ny asa nanirahana antsika hitondra ny filazantsara manerana an’izao tontolo izao. Ny endrika ankapobeny dia mamorona sariohatra ho an’ny Fanahy Masina.
Ny mariky ny lakroa, misolo tena ny filazantsaran’ny famonjena, dia napetraka eo afovoan ‘ny famolavolana mba hanantitranterana ny sorona nataon’i Kristy, izay lohahevitra fototra amin’ny finoana Advantista.
Ny Baiboly mivelatra
Ny Baiboly no fototry ny endrika ary maneho ny fototra ara-Baiboly amin’ny finoantsika. Izy io dia anehoana ny fanekena tanteraka ny tenin’Andriamanitra.
TELECHARGER FICHIER FORMATION MEDIA MEDIA.PPTX
Ny marika advantista mitandrina ny andro fahafito, izay heverin’ny maro ho toy ny « logo », dia nampiasaina nanomboka tamin’ny taona 1997, Na dia mety tsy hampita ny zava-drehetra aza izy, noho ny fampiasana azy tsy tapaka dia mitondra dikany lalina ho an’ireo izay efa zatra izany. Ny mari-pamantarana, toy ireo sary famantarana rehetra, dia miasa mihoatra lavitra noho ny fitahirizana iray noho ny filazana ny teolojia. Isika, mpikambana Advantista mitandrina ny andro fahafito, izay manome an’io marika io. Noho ny heviny izay efa mitranga, sy ny fananganana marika maherin’ny 20 taona izay, dia tsy miova ny endriky ny logo fa avy amin’ny loharano ihany. Ny mari-pamantarana dia mari-pamantarana voasoratra ao amin’ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito manerana ny vohon-tany, ary ny fampiasana ny marika dia zava-dehibe amin’ny tranga ifanakalozana fikambanana ofisialy miaraka amin’ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito. Ny marika voasoratra anarana dia azo ampiasaina amin’ny fiangonana Advantista mitandrina ny andro fahafito, ny sampana, ny andrim-panjakana (ao anatin’izany ny fiangonana sy sekoly) araka ny fanomezan-dalan’ny fihaonamben’ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito, ny fizarana azy, ny sendikà ary ny fihaonambe.
Ankoatra ny fanapahan-kevitra hoe inona no dikan’ny marika ampiasaina, ary inona no lokony hampiasaina azy, dia angatahana ianao tsy hanova fanovozan-kevitra momba ny marika. Zava-dehibe raha fantatra ny singa rehetra amin’io Logo io satria dia manan-danja indrindra ireo amin’ny ankapobeny. Mba hanampiana ny mpijery, dia angatahana ianao tsy hanova na hampiditra ny logo amin’ny itiavanao azy, na ny ampahany aminy, na amin’ny fanoratana anarana sasantsasany, na ampianao sarisary hafa amin’ny ampahany ao amin’ny logo, raha tsy nahazo alalana avy amin’ny fihaonambe. Na dia eo aza ny tetika ara-pahaizana momba izany, dia misy fepetra sasantsasany mifehy ny marika voarakitra an-tsoratra, ary misy fanazavana bebe kokoa momba izany ao amin’ny pejinay ara-dalàna. https://identity.adventist.org/